Klas II Type A2 Factory, Suppliers | China Class Abụọ Type A2 Manufacturers
Home » ngwaahịa » Laboratory Equipment » Ndu Safety cabinets » Klas II Type A2
Na ọtụtụ track ndekọ nke nchekwa, pụrụ ịdabere na arụmọrụ, HFsafe LC cabinets ka ezigbo investments maka a dịgasị iche iche nke ngwa gụnyere ọrụ na-efe efe mmadụ na-achọ Biosafety Ọkwa 1, 2 ma ọ bụ 3 containment.
Ịgwọ Force HFsafe biosafety cabinets isetịpụ ụkpụrụ na mma, imewe, na ọhụrụ na-abịa site a nketa nke karịrị afọ 25 na ahụmahụ. Na Ịgwọ Force na anyị maara na ọ dị mkpa na-enye a elu larịị nke nchebe ọrụ, ngwaahịa na gburugburu ebe obibi na elu technology. Na ọtụtụ track ndekọ nke nchekwa, pụrụ ịdabere na arụmọrụ, HFsafe cabinets ka ezigbo investments maka a dịgasị iche iche nke ngwa na-agụnye ọrụ na-efe efe mmadụ na-achọ Biosafety Ọkwa 1, 2 ma ọ bụ 3 containment.
Ịgwọ Force HFsafe biosafety cabinets isetịpụ ụkpụrụ na mma, imewe, na ọhụrụ na-abịa site a nketa nke karịrị afọ 25 na ahụmahụ. Ọ bụ Class II Type A2 nlereanya na ntuziaka ọrụ ụzọ, na-enye ọtụtụ ihe track ndekọ nke nchekwa, pụrụ ịdabere na arụmọrụ.